China Stationery Mametraka orinasa sy mpanamboatra | SJJ
Mbola mitady Setsam-panoratana manokana ve ianao, izay mamy ho an'ny ankizy? Azonao atao ny mijery ny fonosam-piteninay. 6pcs stationery napetraka ao anaty boaty mitondra plastika misy hatsarana, mora entina, fanomezana tonga lafatra ho an'ny sekoly, trano, fety na fotoana hafa
Mbola mitady manokana ve ianao? Stationery Sets inona no fototry ny mamy ho an'ny ankizy? Azonao atao ny mijery ny fonosam-piteninay. 6pcs stationery napetraka ao anaty boaty mitondra plastika misy hatsarana, mora entina, fanomezana tonga lafatra ho an'ny sekoly, trano, fety na fotoana hafa.
Manolotra karazana fitaovam-pianarana ho an'ny tena manokana, biraon'ny birao, andiana fitaovam-pitaterana ho an'ny ankizy na ho an'ny ankizy. Manolo-tena izahay amin'ny famolavolana vokatra famoronana vaovao ho an'ny ankizy. Ny famoronana, ny kalitao avo lenta ary ny fiarovana no tanjontsika.
Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny kitapo voafetaka namboarina ho an'ny marikao, safidy fanontana mety, fanampiana amin'ny zavakanto, vidiny tsara indrindra na fanomezana fampiroboroboana hafa ho an'ny ankizy, aza misalasala mandefa hafatra ho anay.
Ahitana pensilihazo 2, mpanapaka 1, famafana 1, fanamafisam-peo 1, fantsom-bokotra 1 misy hatsarana
Misokatra famolavolana tsy andoavam-bola sy saram-panontana namboarina.
Mora entina, fanomezana tonga lafatra ho an'ny sekoly, trano, fety na fotoana hafa
Namboarina ho fangatahanao, miaraka amin'ny habe sy loko isan-karazany
Teo aloha: entana
Manaraka: Fehiloha vita amin'ny silika sy fehin-tànana
Raharaha pensilihazo lehibe
Raharaha pensilihazo mangatsiaka
Raharaha pensilihazo any an-tsekoly
Tranga pensilihazo malefaka
Mpanjifa pensilihazo vy